သန်းထိုက်ဦး| December 21, 2012 | Hits:5,676
| | KIO နှင့် အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်များ တရုတ်နိုင်ငံ ရွှေလီမြို့ကျင်းချန်း ဟိုတယ်တွင် ယခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၃၀ ရက်က တွေ့ဆုံစဉ် (ဓာတ်ပုံ – နန်းသီရိလွင် / ဧရာဝတီ)
တနိုင်ငံလုံး အပစ်ရပ် စာချုပ် ရေးဆွဲမှု ဆက်လက် ညှိနှိုင်းရဦးမည်အပစ်ရပ်စာချုပ် လက်မှတ်ထိုးပြီး ၅ ရက်အတွင်း အသက်ဝင်ရန် သဘောတူဦးအောင်မင်းနှင့် KIA တွေ့ဆုံပွဲ စစ်တပ်မှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ မတက်အစိုးရ စစ်တပ်နှင့် KIA တို့ ထပ်မံ တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားသံလွင်မြစ်ပေါ်က ရေကာတာ စီမံကိန်းများကို ကန့်ကွက်သွားမည်
lwin Oo December 21, 2012 - 3:46 pm I think kio have problem with 20 million dollars loose from china support if they have peace with myanmar government
Reply Seng Lawn December 21, 2012 - 4:37 pm How much (%) did u get from China or Gov or KIA…. ? Actualy KIO has no proble… Problem isaperson like u. just doing nothing.. for IDP (War Victims) or Myanmar (I guess)…
Reply ပေါက်စ December 21, 2012 - 5:46 pm အင်တာနက်သုံးပြီး ဗဟုသုတမရှိတဲ့ငတုံးတွေအတွက် လင့်ခ် ပေးလိုက်တယ်။ဖတ်ကြည့်လိုက်။
Reply ပေါက်ကြီး December 21, 2012 - 9:26 pm အော်..ပေါက်စ ရယ်…။ မင်းမလဲ သူများကိုပေးဖတ်စေချင်တဲ့ စေတနာရှိရိုးမှန်ရင် နားဝင်ချိုအောင်ရေးတတ်မှပေါ့ခလေးရယ်။ မင်းပြောပုံနဲ့ ကြည့်ချင်တဲ့သူကတောင် ငတုံးဖြစ်မှာကြောက်လို့ ကြည့်ရဲကြမှာမဟုတ်ဘူး။ မင်းပြောပုံက မင်းကတော့ဗဟုသုတရှိတယ်ပေါ့လေ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဖော် မသူတော်တဲ့ ကြားဖူးသလား။ မင်းကိုယဉ်ကျေးလိမ္မာသင်တန်းကိုအရင် မပို့ခဲ့မိတာ ဒို့လူကြီးတွေရဲ့ အပြစ်ဖြစ်နေပြီ။
Reply swe htwe December 21, 2012 - 6:23 pm We think KIO /KIA should accept goverment ‘s offer. People are very poor now. We ask both sides to try to get peace. Please take care of the people.
Reply လူလေး December 21, 2012 - 6:27 pm ဘယ်သူမှန်မှန်မှားမှား စစ်ရပ်စဲဖို့ စုပေါင်းကမ်ပိန်းလုပ်ကြပါစို့။ အမေရိကန်တွေ ဗီယက်နမ်နဲ့ တိုက်တုန်းကလဲ ဒီလိုလုပ်ခဲ့ကြတာပဲ။ စစ်သားသေတာ မဆန်းဘူး စစ်တိုက်တယ်ဆိုတာ သေတတ်တယ်။ အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေ သေတာ ရွာလုံးကျွတ်နှစ်နဲ့ချီပြေးနေရာ တာ ရပ်သင့်ပြီး။ နိုင်ငံရေးသမားတွေလဲ ဆွံ့အနားမကြားဖြစ်နေကြတယ်။ မဲရွေးပွဲရောက်ရင် ပြည်သူကို ချက်ချင်း ဟိုဟာလုပ်ပေးမယ် ဒီဟာလုပ်ပေးမယ်နဲ့။ နောက်ဆုံးတော့ သိန်စိန်နဲ့ ရွှေမန်းကို ချီးမွန်းတာပဲ လုပ်တတ်တယ်။ အဖွဲ့စည်းတွေလဲ ဟိုနေ့ဒီနေ့တွေ ကို နာမယ်ကြီး ဟိုတယ်မှာ တခမ်းတနား ငွေဖြုန်းနေမယ့်အစား။ စစ်ရပ်စဲအောင်တခုခု ဦးဆောင်သင့်ပါတယ်။ ရခိုင်အရေးလဲ ဘာမှမပြော ကချင်အရေးလဲ ဘာမှမပြော၊ လက်ပန်တောင်းလဲ မသိသလိုနေရင် ခင်ဗျားတို့လဲ ဒီပုပ်က ဒီပဲတွေပဲလို့ ပြောရပါလိမ့်မယ်။
Reply KoYe20 December 21, 2012 - 9:06 pm စစ်ပွဲတွေ မရပ်သေးဘဲ နိုင်ငံရေးပဲ ဆွေးနွေးမယ်လို.ပြောရတာ ဒီလိုဒီလို ရှောင်ရ တိမ်းရ အောင်လို.ပါ။ အချိန်ဆွဲရင် စစ်တပ်က ဘာလုပ်မယ်ဆိုတာ သိပြီးသားလေ။ ဒါမှ ကမ္ဘာက